Baaq Taageero ah oo ku-socda Gudida kartida iyo sharafta leh ee DAN iyoDUCO iyo Canaan mug-leh oo ku wajahan xukuumada Siilaanyo ee beeshafaraha kala bixi la. | Salaan Media
Baaq Taageero ah oo ku-socda Gudida kartida iyo sharafta leh ee DAN iyoDUCO iyo Canaan mug-leh oo ku wajahan xukuumada Siilaanyo ee beeshafaraha kala bixi la.
Anaga oo ah qurbo joogta ka soo jeeda beesha Ciise Muse ee ku-dhaqan UK, Waxaanu Baaq Wadareed Taageero ah oo mug-leh u-soo jeedineynaa gudida barakeysan ee Dan iyo Duco oo beesha Ciise Muse ay ku soo xulatey ee ku soo dooratey laba sanadood ka hor shir-beeleedkii ka dhacey tuulada Dubur ee duleedka Degmada Sheikh. Gudida Dan iyo Duco waa gudi ay beeshu u-dooratey in ay ka shaqeeyaan hir-gelinta Horumarka Arimaha Bulshada ee dhamaan Degaanada ay beeshu degto, ka dib markii ay gaabis ka noqotey ee ay hagratey xukuumadii loo igmadey in ay ka shaqeyso horumarka arimaha bulshada ee degaanadaasi. Gudidu waxay markiiba isku xidheen dhamaan wax-garadkii beesha qurbe-joog iyo qol-qol joogba. waxaana ay gudidu bilowdey in ay daboosho baahiyaha caafimaad iyo kuwa waxbarasho ee degaanadaa ka jira. Gudidu waxay markiiba ka bineysey gobolka Saaxil laba dugsi oo aad u-balaadhan oo uu dhismahoodu hada ka socdo tuulada Dubur iyo banaanka Dooxa Guban kuwaas oo had a dhamaad ay ku-dhow-yihiin qaybihii ugu muhiimsanaa oo dhan ee labaa dugsi ay ka koob-naayeen.
Hadaba anaga oo ah qurba joogta beesha ciise muse ee ka soo jeeda gobolka Saaxil iyo dhamaan degaanadda gobolada kale ee ay beeshu degto,waxaa naga degi waayey siyaasada guracan ee xukuumada Siilaanyo ay degaanka ka wado iyo siyaabaha bilaa-karaamada ah ee ay hadba xukuumadu ula dhaqmeyso gudida odayaasha ah ee Dan iyo Duco ee horumarka la taaban karo ka wada gobolka Saaxil degmooyinkiisa qaar-kood oo haddana dhisaaya oo gacanta ku haya dhameystirka labada dugsi ee balaadhan ee boodhinka ah ee ay gudidu ka-wado gobolka saaxil. Waxaanu aad iyo aad uga xunahay sida cadaanka ah ee balan-ka-baxa ah ee bah-dilaada ah ee bilaa-karaamada ah ee bilaa-milgaha ee ay caadeysatey in ay xukuumada Siilaanyo ula dhaqanto oo u-niyad jebiso odayaasha Dan iyo Duco ee beeshu danaheeda iyo harumarinta degaanadeeda u-wakiilatey ee wax-qabadka la taaban-karo gobolka ku soo kordhisey.Hadaba hadii aanu nahay qurbo-joogta degaanada beeshaa si degto ka soo jeeda waxaa noo cadaatey qodoban biyo kama dhibcaanka wada ah ee hoose in beesha ciise muuse lagula kacey:
1- Waxaa noo cadaatey in beesha Ciise Muse ay dawladu u-cadeysatey dagaal cadaan ah oo hor leh anaga oo og oo aanu daah-naga saarneyn danaha gaar ka ah ee ay xukuumada siilaanyo ay gobolka Saaxil ka leedahay ee ay sugu kari la dahay in ay fuliso.
2- Waxa noo cadaatey in xukuumadu ay ku kala direyso oo is-kaga hor-keeneyso beesha ciise muse xoolihii loogu shaqeyn lahaa ee wax-loogu qaban lahaa shacabka dan-yarta ah ee debedyaalka u-ah danta iyo dac-darada dabeecada nololeed ee adag ee degaanadaa ka jira.
3- Waxaa noo cadaatey in Madaxtooyadu ku mash-quushey sidii Dan iyo Duco iyo beesha loo kala go’geyn lahaa ee loo kala fur-furi lahaa ee beesha la isaga hor-keeni lahaa, si ay u-fushato oo ay ugu fududaadaan sifeyaashii u-qarsoonaa ee beeleysanaa ee ay gobolka ka wadey.
4-Waxaanu aragney cadaadiska xadka dhaafey ee xadh-kaha goostey ee ay xukuumadu ku hayso kuwa kuraasta beesha metela ee iyada Awr-kiraale-yaasha u-ah ee ay beeshoodii kar-baashka iyo shaa-buuga ay uga dhigeen.
5- Waxaanu aragney oo garawsaney xaq-darada baahsan ee aaney dib-iyo horeba beeshu dawlada ugaga helin saamigii ay beel ahaan xaqa iyo xeegaanka ugu laheyd, taas oo beeshii ka dhigtey beel-dul -saar ah oo laga eexdey.
6-Waxaanu aragney qaabka cadaalad darada ah ee ay xukuumadu u-qeybisey kheyraadkii dalka, anfacii, ilihii dhaqaalaha, darajo-bixintii , mansabkii dawalada iyo adeegyadii bulshadaba taas oo aaney beesha ka soo gaadhin wax la taaban karo oo-dheef ah ama dha-dhan ahba.
7-Waxaanu aragney daqaalka qaawan ee xukuumadu kula jirto xisbigii Ucid oo xubno degaan oo xisbigaa ahaa ay xukuumadu ku khasabtey in ay khasab-ku-balweeyaan oo ku biiraan xibul-xaakimka kulmiye iyada oo u-jeedada ka danbeysana beeshu ka wada dheregsan tahay.
8- Markaanu aragney in xukuumadu ay fulineyso go’aanadii shirkii Gar-adag ee lagu degaameynaayey beesha madaxweynuhu ka soo jeedo degaanada Istiraatiijiga ah ee Somaliland, Gaar’ahaan degaanada gobolka Saaxil oo uu jiifo kheyraad badan oo dabiici ah oo ummadda S/land oo dhan ka dhaxeeya laakiin loo qoondeeyey oo Liisamo badan loo siiyey shaqsiyaad shirkado sheeganaaya oo ka soo jeeda beesha Madaxweynaha S/land.
9-Mar kaanu aragney in beesha Ciise Muse ay Madaxtooyadu ku wado dagaal qaawan oo cadaan ah iyo mid daaha dabadiisa laga wado oo joogto ahaa ilaa mudo dheer.taas oo ummadda S/land oo dhami ay mar-khaati ka wada tahay.
10- Waxaa iyana dhamaan waxgaradka iyo aqoon yahanka beeshu ay isku raaceen in beesha Ciise Muuse tahay beel sadkoodii beel-ahaaneed la-duudsiyey oo lagu soo duuley oo weliba colaad iyo ciil-gadhoodhey daraadeed ganafka lagu dhuftey taas oo hadh-iyo habeen ay xukuumadu beesha si ba’an ay weerar joogto ah ugu wado, waxaana kaagaa mar-khaati ah shaqsiyaadkii ay xukuumadu dhawaan ka soo ururisey degaanada ay beeshu degto ee ay ku khasabtey dhamaan in ay “khasab-ku-balweeyaan” oo xukuumada u sacabka ugu-tumaan iyo labadii xildhibaan ee golaha degaanka ee Berbera ee Ucid ka tirsanaa ee sida sharci-darada ah loogu khasbey iyagana in ay xibul-xaakimka ku biiraan ama ay mansabyada ay hayaan dhulka dhigaan.
Hadaba Maa-daama aaney xukuumada Siilaanyo laheyn garasho dawladeed iyo garaad-fog, in aad cad-kaaga beeleed goosato mooyaane, Waxaanu xukuumada Siilaanyo u-cadeyneynaa in hadii uu xaalku sidaa ku sii socdo in aaney qurba-jooga beeshu, wax-garadka, haweenka, iyo dhalinyarada beeshu aaney mar-naba ogolaandoonin in hagar-daamo hor-leh oo danbe in beesha lagula kufo. in aan caano danbe oo xoor leh oo degaanada beeshu degto laga soo lisey oo beeshu ka maqan tahay in aan beesha agteeda lagu qudh-qudhin- lagu-cantuugin amaba lagu fuuqsan. in aaney marna yeeleyn beeshu in kheyraadka degaanadaa alleh ku uumey in aan nin keligii socda oo shirkad sheeganaaya oo dhinac ka-raran aan loo ogolaan doonin in uu kelidii maalo kheyraadkii ummadda S/land oo dhan u-dhaxeeyeey kaas oo hore la isugu deyey.Waxay gurbo joogta beeshu goosatey in ay si guud iyo si gaar ah-ba ay ula socoto dhaq-dhaqaaqa ka socda degaanada ay beeshu degto anaga oo dareenkayaga ma rkastaba si toos ah saxaafada kala duwan ugu soo gudbin doona. Waxaanu Madaxweynaha ka codsaneynaa in uu soo celiyo kalsoonidii guud ee beesha oo uu ka waantoobo fara gelinta hoose ee beesha, colaada iyo laa luushka badan ee uu ku bixinaayo shaqsiyaadka kooban ee uu doonaayo in ay u- noqdaan guul-wadeyaasha darban ee daba-dhilfka ah ee dalabka xukuumada ugu -shaqeeya.
Waxaanu Leenahay Madaxweyne Siilaanyo hadii aad beesha wax-garadkeedii aad u-diidey in ay kula furaan kulana xidhaan Madaxtooya albaabadeeda , Ma waxaad garanweydey hintaaqada iyo hagar-daamada ka-daa iyo colaada beeleysan ee joogtada ah !!! Waa amuur alleh iyo arin ugub ah oo beeshii ciise muse ay arkeen sanadkaa maanta ah !!!!
Xoog-hayaha Guud ee Qurbo Joogta Ciise Muse
ee Boqortooyada Ingiriiska KULAN- UK
Mr Hassan Ahmed – Hassan keyd.